Warar - Euroshop 2020 & Couleur Lighting
Euroshop 2020 & Nalalka Couleur
Kani waa Laydhka Couleur wuxuu ka qayb qaatay EuroShop, daabacaadda 2020 ee qaybta tafaariiqda dhacdadii ugu muhiimsaneyd waxay fursad u siisay Couleur Lighting inay muujiso horumarkiisa iyo hal-abuurkiisa. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino qof kasta oo soo booqday qolkeena ku yaal Euroshop ee ku yaal Düsseldorf. Ujeedo wajiyada magacyada iyo soo bandhigida Couleur Lighing tabo cusub oo lasii daayay sanadkan waxay ahayd farxad run ah! Couleur Lighting ee kooxda ayaa la tusay xirfadooda xirfadeed si ay ugu soo bandhigaan alaabtayada macaamiisheena.
Waxaan ku martiqaadnay macmiilkeena in lala shaqeeyey sanado badan si uu u soo booqdo qolkeena, iyo macaamiil badan oo cusub ayaa sidoo kale soo booqda qolkeena.
Couleur Lighting oo ah nuqul xirfadle ah oo ka mid ah Laydhka Strip Lighting ee loogu talagalay xayeysiinta sanduuqa iftiinka in ka badan 10 sano, waxaa jira dhowr boqol oo nooc ah LED Strip Light.
Waxaa jira daraasiin LED Strip Light ah oo ku yaal Euroshop, kuwaas oo si aqlabiyad leh ay u aqoonsadeen macaamiisha.
Bandhigeenu sidoo kale wuxuu gaadhay guulo wanaagsan. Waabkeenu wuxuu soo jiitaa macaamiil badan, sababtoo ah badeecadayada oo tayo sare leh iyo aqoonteenna xirfadeed.
Waxaa jira arrimo badan oo aan la hubin, Weli waxaan soo saarnay shey cusub-RGB Dynamic Curtain LED Strip, oo soo jiitay tiro badan oo macaamiil ah isla markaana midabyo qurux badan ku soo kordhiyay qolkeena.
Tayada Badeecadeena-gadaal-iftiiminta & Edge-lit-iftiin ayaa sidoo kale ka heshay ammaan ballaadhan
Intaa waxaa sii dheer, Waxaan bilownay madal loogu talagalay bandhigyadeena cusub ee firfircoon-RGB Curtain LED Strip waxayna ka heshay jawaab celin aad u wanaagsan booqdayaasha EuroShop.
RGB Curtain LED Strip waa jiil cusub oo muujinaya LED-ka oo isku daraya sawirro daabacan oo daabacan oo leh saameyn dhaqdhaqaaq iyo firfircoonaan firfircoon oo soo jiidaneysa dareenka dadweynaha iyagoo u keenaya muuqaalada daabacan nolosha.
Waxay u isticmaali kartaa sanduuqa iftiinka, waa kacaan dhab ah oo ku saabsan isgaarsiinta dukaanka taas oo siin doonta khibrad adeegsi firfircoon oo xusuus leh macaamiishaada.
Waxay sidoo kale u isticmaashaa qurxinta guriga, Baarka, Hoteelka iyo suuqa laga dukaameysto. Waxay qaban doontaa indhaha qof, waana kuu faa'iidi doontaa.
RGB Curtain LED Strip wuxuu noqon karaa iyadoo la tixraacayo codsigaaga barnaamijka, oo beddel midab kala duwan waxaad rabto.
RGB Curtain LED Strip wuxuu leeyahay faa'iidooyin qaar: rakibid sahlan, muuqaallo si dhakhso leh ayaa loo cusbooneysiin karaa, dhammaadyo badan ayaa la heli karaa waana gaarsiin degdeg ah si loo yareeyo kharashka gaadiidka.
Euroshop waa safar lama ilaawaan ah, waxaan sugi karnaa inaan kala saarno Euroshop2023 ee soo socda, ku soo dhawow inaad naga dhex aragto qolkeena.
Waqtiga boostada: Feb-16-2020